Vao avy nivoaka namangy fasana… : dimy lahy nirongo Kalach naka an-keriny zanaka karana | NewsMada
Vao avy nivoaka namangy fasana… : dimy lahy nirongo Kalach naka an-keriny zanaka karana
Teo anatrehan’ny fianakaviany, raha iny izy ireo nirava avy nandevina teny Ilafy iny indrindra, omaly antoandro, no nalain’ny jiolahy dimy lahy, nirongo basy Kalachnikov an-keriny ny tovolahy zanaka karana mpandraharaha sady tompona orinasa lehibe maro eto an-dRenivohitra.
Jiolahy nisaron-tava sy nitondra basy Kalachnikov nandeha fiara Mazda Berline iray miloko mainty no tompon’antoka tamin’ity fakana an-keriny zanaka karana iray 27 taona avy namangy fasana niaraka tamin’ny fianakaviany teny Ankadikely Ilafy, omaly antoandro. Araka ny loharanom-baovao voaray, efa maty paika tanteraka ny fomba nakan’ireo jiolahy ilay zanaka karana tamin’io fotoana io. Ny sasany tamin’ireo olon-dratsy, niandry teo ivelan’ny vavahady miditra ny fasana, ny hafa kosa naka azy teo imason’ny fianakaviany. Nanapoaka basy nampitahotra ny fianakaviany ireo jiolahy nandritra ity fakana an-keriny ity. Samy tsy nisy nanam-po na inona na inona rahateo ny fianakaviany ka tsy afa-nanoatra manoloana ireo jiolahy mitam-piadiana mahery vaika. Araka ny fantatra nisy polisy roa lahy niambina ny fianakaviana. Naratra vokatry ny tifitra nataon’ireo jiolahy kosa ny iray tamin’ireo polisy roa lahy ireo.
Nampidirin’izy ireo tao anatin’ilay fiara Mazda Berline iray ity zanaka karana ity ka nentin’izy ireo nihazo ny lalana mankany Analamahitsy.
Nahazo loharanom-baovao ny zandary avy ao amin’ny borigadin’Ankadikely momba ity raharaha ity ka nidina haingana teny an-toerana. Efa tafaporitsaka kosa ireo olon-dratsy.
Lasibatra hatrany ny zanaka karana…
Nandray ny andraikiny avokoa ireo zandary avy ao amin’ny borigady manodidina, Sabotsy Namehana, Ambohitrarahaba, Ambohimangakely ary Soamanandrariny nanao sakana amin’ny lalana mety handalovan’ireo olon-dratsy. Nanao fikarohana avy hatrany ireo faritra mety ahina hiafenan’ireo jiolahy teny amin’ny manodidina an’Ilafy kosa ny zandary avy ao amin’ny borigadin’Ankadikely.
Tsiahivina fa nalain’ny jiolahy an-keriny toy izao koa teo am-piandrasana fiara mpitatitra mpianatra handeha hianatra eny amin’ny Lycée Français ny zanaka karana iray antsoina hoe Firoze Nourbhay, 16 taona, ny 12 marsa 2017 lasa teo teny Andranomena. Nirefodrefotra koa ny poa-basy tamin’io fotoana ka nahavoatifitra polisy iray mpandamina fifamoivoizana eny an-toerana.
Nisy ny antso fanaraina ho an’ny governemanta Malagasy nataon’ny fikambanan’ireo karana monina eto amintsika manoloana ity raharaha fakana an-keriny nahalasibatra ny teratany karana ity. Niray hina hatrany ireo fianakaviamben’ny Karana taorian’izay ka niafara tamin’ny fanakatonan’izy ireo ny tranombarotra an’ny Karana rehetra na teto an-dRenivohitra izany na tany amin’ny faritra ho mariky ny firaisan-kina manoloana ny raharaha fakana an-keriny.